YALIS Intro - Zhongshan City YALIS Akụrụngwa Ngwaahịa Co., Ltd.
Ime ụlọ ụzọ
Minimalist Door ịlesụ
Dozọ Modernzọ Modernzọ nke Oge A
Ọnụ ọnụ ọnụ ụzọ dị ọnụ ala
Ebughibu Mee Glass Door ịlesụ
Childproof Door ịlesụ
Door Hardware ngwa
Ọnụ ụzọ na-adabere
Ọnụ ụzọ nkwụsị
YALIS onye nkesa
Onye na-arụ ọrụ ngo
Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd. hiwere na 2009, ma dị na Xiaolan Town, Zhongshan City, nke a maara dị ka China Hardware Products Industry Base. YALIS bụ onye na-ahụ maka ụzọ na-ejikọ ọnụ R&D, mmepụta na ahịa.
YALIS ugbu a nwere ebe nrụpụta ihe na-ekpuchi mpaghara nke 7,200㎡, yana mkpokọta mkpokọta nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10,000㎡ na karịa ndị ọrụ 100. Na 2020, YALIS ga-emezigharị ihe owuwu nke ụlọ ọrụ ahụ, gụnyere iwebata sistemụ njikwa nke ISO, mmezi nke usoro nhazi, ịnye ndị ọrụ teknụzụ yana ịgbakwunye akụrụngwa mmepụta akpaaka maka usoro mmepụta dị iche iche. A na-atụ anya na a ga-agbasawanye osisi ahụ ma tinye ya n'ọrụ n'ime afọ atọ.
Site na ịrị elu nke ọnụ ụzọ ndị a na-adịghị ahụ anya, ọnụ ụzọ osisi aluminom, ọnụ ụzọ ime ụlọ, ọnụ ụzọ osisi ndị na-enweghị ike na ngwa ngwa ngwa ndị ọzọ n'ahịa, YALIS ejirila ụzọ ụzọ mepere ụzọ minimalist na ụzọ dị fere fere mechie ụzọ zinc alloy door handle ngwaahịa akara.
N'ihi mmelite ngwaahịa a, emegharịrị ngosi ngosi YALIS. Ọ na-ekewa n'ime 5 ebe, ụzọ ngwaike ngwa idaha idaha, ọhụrụ ngwaahịa ngosi mpaghara, ot ngwaahịa ngosi mpaghara, ije ụzọ ngwaike ngwọta ebe na ahịa ogbo onwunwe ebe, nke mma-egosi mmetụta nke ọnụ ụzọ ngwaike na ụzọ na-enye ndị ahịa a mma ahụmahụ.
YALIS agafeela asambodo ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ, ISO9001 asambodo njikwa njikwa mma, asambodo Switzerland SGS, asambodo German TUV, asambodo EURO EN, ma nwee ihe karịrị akara ikikere 100 na ọtụtụ ikike ikikere ihe eji arụ ọrụ.
E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị nrụpụta ụlọ ọrụ ụzọ:
Nke mbụ bụ i imitateomi atụmatụ nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ ndị na-emepụta ihe. Ngwaahịa nke ụlọ ọrụ dị otú ahụ ma ọ bụ ndị nrụpụta enweghị atụmatụ ọhụụ yana ikike ịmepụta ngwaahịa ọhụrụ.
Nke abụọ bụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị na-emepụta ihe na-enyekarị ọnụ ụzọ alloy alloy, ụzọ ụzọ anaghị agba nchara ma ọ bụ ụzọ ụzọ ígwè. A na-ahụkarị ụdị ngwaahịa ndị a dị ka: ọnụ ọgụgụ buru ibu, na-echekwa ọnụ ahịa, ọ chọghị mmepe ngwaahịa na ihe ọhụrụ.
YALIS, onye na-emepụta ihe eji emechi ụzọ zinc yana ụzọ ngwaike ụzọ, ọ bụghị naanị na ikike mmepe ngwaahịa maka ụdị ndị ahịa dị iche iche na ngwa ụzọ ụzọ, kamakwa ya na ahịa na nkwalite ikike na ahịa dị iche iche.
Nke atọ bụ Italian na-eduga ika. Ngwaahịa ha bụ nke ọla. Akara ha nwere oke ugwu n’elu uwa nile. Agbanyeghị, ngwaahịa ha nwere ike ịdị maka ndị ahịa pere mpe - ndị ahịa dị oke ọnụ.
Na 2020, YALIS ga-ewere usoro abụọ nke ịmekọrịta mba na mmepụta akpaaka dị ka isi usoro mmepe. N'otu aka, ọ ga-edozikwa onwe ya dị ka ọkachamara ụzọ ngwaike ngwaike soplaya. Na-ewere China dị ka isi, na-agbasawanye na Europe, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Middle East na mba ndị ọzọ, na ịtọlite ​​ndị ọrụ ndị ahịa iji dozie isi ihe mgbu nke ndị na-emepụta ọnụ ụzọ na ndị na-ekesa mba ọzọ. N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe emere atụmatụ ọzọ, tinyekwa akụrụngwa mmepụta akpaka, webatara sistemụ njikwa ISO, dị njikere ijere ndị ahịa ozi nke ọma.
Na 2021, ụlọ ọrụ mmepụta ihe ga-emezue ma gbasaa nwayọ. Nhazi njikwa nke usoro mmepụta na akụrụngwa akụrụngwa ga-abawanye ikike mmepụta. N'ihe banyere ikike ire ere, atụmatụ a abụghị naanị na-eme ka ndị ọrụ ọrụ mbụ nke ndị ọrụ ahịa na-abawanye, kamakwa ọ na-agbakwunye ndị ọrụ ọwa ọrụ. Mgbe ị na-ejere ndị nrụpụta ụzọ na ndị nkesa ụzọ ozi, ọ nwere ike ịza ngwa ngwa maka mkpa ndị ọrụ ngo. YALIS ga-enwe nnukwu ọganiihu na 2021.
ỌZ KWES FREER FREE IHE +86 135 6061 4928
Adreesị Rd Songbai No.77, Hefeng Industrial Area, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, PRChina 528415